ကျောင်းကားတွေမှာတောင် အသုံးပြုလာတော့မယ့် Ford ရဲ့ Godzilla 7.3 Liter V 8 Engine ! – MyMedia Myanmar
ကျောင်းကားတွေမှာတောင် အသုံးပြုလာတော့မယ့် Ford ရဲ့ Godzilla 7.3 Liter V 8 Engine !
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ် လောက် တုန်းက Ford အနေနဲ့ 2020 ခုနှစ် ထုတ် F-250 အတွက် Pushrod Engine အသစ်ဖြစ်တဲ့ V 8 ကို ကြေညာခဲ့တုန်းကတော့ အဆိုပါ ကား‌အတွက်ပဲ သီးသန့် လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနှစ်က နှစ်လယ်ပိုင်း လောက်မှာတော့ အဆိုပါ အင်ဂျင်ကိုပဲ Crate Engine တစ်မျိုး အနေနဲ့ ဖန်တီး ပေးလာနိုင်ဖို့ အတွက်က ပိုပြီးအရေးပါလာခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အင်ဂျင်တွေ ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုတာမျိုးက စိတ်ဝင်စားစရာ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာ တတ်တာ ဖြစ်ပြီး တကယ်ကို ကြီးမားတဲ့ အင်ဂျင်တွေဆီကနေ ထွက်ပေါ်ရရှိလာမယ့် မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကတော့ Tune Numbers တွေအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကို အားရစရာ ကောင်း လှပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခု ဆိုရင် Twin-Turbo Godzilla V 8 Engine ကတော့ သူ့ရဲ့ မြင်းကောင်ရေအားကို 1,114 ( 830.7 kW ) အထိ စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို အကောင်းစား ၊ အကြမ်းစား အင်ဂျင်တစ်မျိုးကို အခု နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကား အကြောင်းကို သိရင်တော့ တကယ် အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Blue Bird ကုမ္ပဏီ ဟာ Ford နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီးတော့ အခု နောက်ဆုံး ပေါ် 7.3 Liter V 8 ကိုမှ Propane နဲ့ Gasoline ဆိုပြီး နှစ်မျိုးစလုံးကို မှာယူထား လို့ပါပဲ။
ပိုပြီးထူးခြားတာ ကတော့ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ ဟာ သူတို့ရဲ့ 2022 Model Year မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် ကျောင်းကား တွေမှာ အခုအင်ဂျင်အသစ် တွေကို တပ်ဆင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ အင်ဂျင် တွေမှာ Purpose-Built Fuel စနစ်လည်း ပါဝင်ထားပြီး အထူးသဖြင့် School-Bus Application တွေအတွက် စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ကာ အဆိုပါ App ကိုတော့ Roush Clean Tech ကနေ ရေးဆွဲ ပေးထား တာပါ။ အခု အင်ဂျင်ကတော့ ယခင်တုန်းကတည်း အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ Ford ရဲ့ 6.8 Liter Engine တွေ နေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ရောက် လာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Blue Bird Cooperation ရဲ့ CEO နှင့် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Phil Horlock က ပြောကြားရာမှာတော့ အခုလိုမျိုး Blue Bird ၊ ROUSH CleanTech နဲ့ Ford တို့ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပိုမို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလာမှာ ဖြစ်သလို Ford ရဲ့ အင်ဂျင်အသစ် စွမ်းဆောင်ရည် ၊ နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းအင်ချွေတာ မယ့် Fuel စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ Micro Bird School-Bus တွေကို မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ School Bus မှာ တပ်ဆင်ဖို့ အတွက်ကတော့ ယခင် တုန်းက အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ 430 hp (320 kW ) စွမ်းဆောင်ရည် အစား 350 hp ( 261 kW ) အထိကို မြင့်တက်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကားရဲ့ Output အပိုင်းကတော့ အရမ်းကြီး မများပေမယ့်လည်း မြင်းကောင်ရေအားနဲ့ Torque အပိုင်းတို့မှာ ပေါင်းစပ်မှုအားက ကောင်းမွန် နေတာကြောင့် Commercial Workhorse အတွက် ရည်ရွယ်မယ် ဆိုရင်တောင် အဆင်ပြေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမှာ ရှိလို့ နေတာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အခုလို ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေ‌ ပေမယ့်ယခု 7.3 L Engine ကတော့ ယခင် က 6.8 L Mill ထက် ပိုပြီးတော့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခင် တုန်းကတော့ Blue Bird ရဲ့ ကျောင်းကား တည်ဆောက်ရေး နည်းပညာ ရှင်တွေဟာ ပိုပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အနေအထား ရအောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြောအခု ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ အင်ဂျင်အသစ် နဲ့ Gen5Fuel စနစ် တို့ နဲ့ အတူ ကျောင်းကားတွေကို စတင် မှာယူနိုင်ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ကျောင်းကားတွေမှာတောင် အသုံးပြုလာတော့မယ့် Ford ရဲ့ Godzilla 7.3 Liter V 8 Engine ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-28T17:02:36+06:30January 28th, 2021|MYCARS MYANMAR|